Ukuhlanzwa Komoya kanye ne-Disinfection System ifektri nabakhiqizi | SONGZ
Ukuhlanzwa komoya kanye nohlelo lokubulala amagciwane
Imininingwane yokuhlanzwa komoya nemingcele yezobuchwepheshe
Ifanele i-air conditioner eyodwa yokubuya:
Ifanele umoya wokubuyisa ophindwe kabili:
Iphrojekthi engcolisayo Ukuhlushwa kokuqala kokungcola Kukaliweivolumu yomoya (m3 / h) Ukusebenza 1h ukususwa rate (%)
I-Formaldehyde (HCHO) 0.96 ~ 1.44mg / m3 ﹥4800 90.4%
I-Toluene (C7H8) 1.92 ~ 2.88mg / m3 ﹥4800 91.4%
I-Xylene (C8H10) 1.92 ~ 2.88mg / m3 ﹥4800 93.0%
Inani lama-organic compounds (TVOC) 4.8 ~ 7.2mg / m3 ﹥4800 92.2%
Iyahlukanisa 0.70 ~ 0.85mg / m3 ﹥4800 99.9%
Izilwanyana ezincane Ngokuya nge-GB 21551.3 ﹥4800 99.9%
Izimo zokuhlolwa: imitha engu-12 yemoto enkulu yabagibeli, abalandeli be-evaporator abangu-6, ukusebenza kokugeleza komoya okuphezulu, ukusakazwa kwangaphakathi
Ama-ion aqinile anekhono le-redox elinamandla kakhulu, angaxhuma futhi abole i-formaldehyde, i-methane, i-ammonia namanye amagesi anuka kabi (i-VOC) emotweni angene ku-cabin bon dioxide, amanzi ne-oxygen. Izinga lokususa lifinyelela kuma-95% ngemuva kwehora elingu-1 lokusebenza.
Ukuhlolwa kokuhlala: Ngemuva kwemizuzu engama-25 yokuhlanzwa okujule, i-PM2.5 yehlisiwe isuka ku-759 μg / m3 (ukungcoliswa okusindayo okuyibanga lesithupha) yaya ku-33 μg / m3 (ikhwalithi yomoya yokuqala), nekhwalithi yomoya yayinkulu kakhulu kuthuthukisiwe.
1. Kumodi yokubambisana, inani lokukhiqiza i-ozone lingu-0.05ppm, elingaphansi kakhulu kunenani lokuphepha lika-0.15ppm. Izinga lokuvala inzalo lifinyelela kuma-99% ngemuva kokusebenza kwemizuzu engama-30.
2. I-ultraviolet ayinamandla okungena futhi ayibangeli monakalo emzimbeni womuntu lapho ingafakwanga imisebe ngokuqondile; kukhona ungqimba we-photocatalyst, ungqimba wesihlungi se-grille kanye nephaneli lomnyango we-grille phakathi kwelambu le-ultraviolet inzalo nekhabhathi ukuvimbela ukuvezwa okuqondile kubagibeli, Kungasetshenziswa ngokuphepha.
Ukuhlushwa kwe-ozone Izinga lokuzala inzalo ye-0.05PPM Inzalo rateat 0.1PPM emakamu
amahora okusebenza Imizuzu engu-15 Imizuzu engama-30 Imizuzu engu-15 Imizuzu engama-30
I-Staphylococcus aureus 75.1% 86.3% 81.8% 98.2%
I-bacillus yesifo sofuba 91.2% 95.5% 95.9% 99.4%
Amakholoni emvelo 93.7% 99.8% 98.6% 99.9%
Izimo zokuhlolwa: Sebenzisa i-0.05ppm ne-0.1ppm O3 okuhlushwa ukuhlola umphumela wayo wokuvala inzalo nezinga lokuzalisa esitsheni esivaliwe esingu-200L.
Izici zohlelo lokuhlanzwa komoya nezinzuzo
1. Ubuchwepheshe obuyisisekelo obune
Ukuthuthukiswa kwekhwalithi yomoya
Izinto Iqoqo le-Electrostatic uthuli (PM2.5) UV isibani i-ionizer Isihlungi se-Photocatalyst
2. Ubuchwepheshe be-ion photocatalytic polymerization technology, ukuhlala komuntu ngomshini, ukubulala amagciwane kanye nokuvala inzalo:
Ubuchwepheshe obuqinile be-ion, buhlanganiswe ne-UVC ultraviolet, i-oxygen esebenzayo, i-ion engakhi kanye ne-photocatalytic polymerization technology, ngokuqonda nangokushesha ukubulala amagciwane nama-bacteria, nokuvimbela ukusabalala kwezifo. Izinga lokuvala inzalo lingu-99.9%, kanti izinga lokususa uthuli lingu-99.9%. Ingasusa ngempumelelo amagesi ayingozi njenge-formaldehyde, i-benzene, i-ammonia, nephunga elihlukahlukene, intuthu, nephunga egumbini lezimoto. Inendlela yokusebenza yokuhlalisana komshini womuntu, ukubulala amagciwane ngaphandle kokufa, kanye nokungcola.
3. Yengeza umoya-mpilo we-oxygen ions ukuqeda ukukhathala kokuhamba.
Izigidigidi ezingama-6 zomoya-mpilo ongemuhle, zivuselele umoya, zisebenzise amaseli, zithuthukise ukuzivikela komzimba womuntu futhi ziqede ukukhathala kokuhamba.
4. Ukuhlanzwa komoya, ukubola kwamagesi ayingozi, ngaphandle kokulungiswa futhi akukho okudliwayo.
Kufakwe ngaphakathi kwe-grille ye-air conditioner, usayizi omncane awungeni esikhaleni esengeziwe, ngokusebenzisa ukusabela kweketanga ukubola ngokuqinile igesi engcolisiwe kule ndlwana, kuqede izinhlayiya ezimisiwe ze-PM2.5, PM10, gcina imvelo yomoya emotweni ihlanzekile futhi iphilile, cha okudliwayo ngesikhathi sokusetshenziswa, Ukulondolozwa mahhala.
5. Ukuqapha okukude, isexwayiso sokuphepha, ukulawula okuhlakaniphile.
Ingaxhunywa kulayini we-CAN wayo yonke imoto, futhi idatha yenzwa yekhwalithi yomoya ingabhekwa ngesikhathi sangempela kudeshibhodi, futhi ukushintshwa okuhlakaniphile kanye nesixwayiso sokuphepha sangempela semodi yokusebenza kwalowo ohlanzayo kungatholakala ngokusho ikhwalithi yomoya; iwindi lokubuya linokubonisa kwalo okuzimele (bonisa ukuhluka kwezinhlayiyana ze-PM2.5, izinga lokushisa, umswakama kanye nenkomba yekhwalithi yomoya, ongakukhetha), kuvumela abagibeli ukuthi baqonde ngokunembile isimo sokungcola kwemvelo yemoto ngokubonisa, okwenza umkhiqizo ube sezingeni eliphakeme futhi ebonakalayo ngokubukeka.
6. Ukusebenza kahle okuphezulu, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi, umthelela omncane ekusetshenzisweni kwamandla emoto noma ebangeni lokuhamba.
Imodi "ye-Dynamic polarization" iqinisekisa ukusebenza kahle kokuhlanzwa okuhlala isikhathi eside futhi okuzinzile, umthamo wokubamba uthuli uphakame kaningana kunesihlungi semininingwane efanayo; Ifaniswe nohlelo lokuphakelwa kwamandla kwemoto yomgibeli, ukusetshenziswa kwamandla kwemodyuli yokuhlanza isibulali magciwane webhasi lamamitha ayi-12 kungu-10W kuphela, kuphephile futhi konga amandla, kufanelekile Kuhlonyelwe amabhasi ajwayelekile nawakagesi.
Ukuhlolwa Kokuhlanza Umoya
1 Izinga lokususa（1h） 99.9%
2 Izinga lokususa i-formaldehyde （1h） 90.4%
3 Izinga lokususa i-Toluene（1h） 91.4%
4 Izinga lokususa（1h） 92.2%
5 Izinga lokususwa kwe-Xylene（1h） 93.0%
Ukuncintisana Okuyinhloko kwe-SONGZ Air Purifier
Isihlanza umoya se-SONGZ
Umsebenzi wokuhlanzwa ohlanganisiwe
Ingabe idinga umoya omncane? Ukuphefumula ngabalandeli Akukho moya
Indlela yokuhlanza umoya 1. Uhlelo oluqinile lokuhlanzwa komoya2.I-module ye-ozone ethuthukisiwe (uma uthanda)Ukususwa kothuli okuhlanganisiwe
Isihlungi se-photocatalyst esihlanganisiwe
5. Inzalo ye-UV ehlanganisiwe
1. Ukuvalwa kwesibani semoto ye-UV2. Ukufafaza isixazululo sokubulala amagciwane
Ukuncintisana okuyisisekelo 1. Ukuhlanganiswa sekukonke, usayizi omncane, izinguquko ezimbalwa kakhulu emotweni
2.Ingasusa ngempumelelo zonke izinhlobo zamagciwane, amagciwane, uthuli namagesi anobuthi futhi ayingozi
3. Izindleko zizonke zokuhlanza ziphansi. Uma ufuna ukufaka imodyuli ye-ozone eyenziwe ngcono, udinga kuphela ukufaka izindleko ezingeziwe ezingaphezu kwe-100 RMB.
4. Umsebenzi wokuhlanzwa komoya ungavulwa lapho uthwala abagibeli. Isihlanzisi somoya uqobo sizokhiqiza inani elincane le-O3 (cishe i-0.02ppm, ngaphakathi kwebanga eliphephile) ukufeza umphumela wokuvala inzalo wesikhathi sangempela.
5. Lapho i-anti-virus idingeka kuyo yonke imoto, ngaphambi kokuba imoto ivulwe noma lapho kungekho muntu emotweni, imodi ye-ozone eyenziwe ngcono ivuliwe, futhi izoma ngokuzenzakalela ngemuva kwemizuzu engu-15, esebenza kahle kakhulu nokonga amandla.
6. Uma izindlela zokupholisa, zokushisa nokungenisa umoya zingavulwa, isithandwa sesistimu yokuvala inzalo siqala ngokuzenzekelayo imizuzu emi-5 bese simiswa imizuzu engama-20. 1. Izinguquko ezinkulu kuyo yonke imoto, kuyadingeka ukufaka amalambu angeziwe e-ultraviolet emotweni, futhi kufanele kufakwe isethi ephelele yohlelo lokufafaza amanzi nge-disinfection. Iphrojekthi yokulungisa inkulu futhi izindleko ziphakeme.
2. Amagciwane namagciwane angahlanzwa, kepha alikho ikhambi elifanele lothuli namagesi anobuthi nayingozi.
3. Ukuhlanzwa komoya nokubulala amagciwane akuvunyelwe lapho kuthwalwa abagibeli. Uma kwenziwa nangemva kokubulala amagciwane, kuyadingeka ukushintshaniswa komoya, futhi lokhu kusebenza kahle.
Amacala Ohlelo Lokusebenza Lokuhlanzwa Komoya kwe-SONGZ
Njengamanje, inikezwe ngamaqoqo kumamodeli aphezulu we-OEMs njengo-Xiamen Jinlong noZhengzhou Yutong.
Siyethemba ukusebenza nawe ukwenza ngcono imvelo ngesikhathi sokuhamba kwabantu nokwenza ngcono ikhwalithi yomoya ngaphakathi emotweni!
Langaphambilini I-Conditioner yebhasi ye-Double Decker Bus
Olandelayo: Isipholisi somoya semoto yabagibeli